अचम्मको वयस्क Gameplay संग Patreon अश्लील खेल
आधुनिक प्रविधि र छिटो इन्टरनेट छ एक क्रान्तिको ल्याएको गर्न हाम्रो दैनिक जीवनमा । प्रशस्त अमेरिकी कल्पना गर्न सक्दैन माध्यम ले जा एक पूर्ण दिन जा बिना अनलाइन मा अप जाँच गर्न विभिन्न कुराहरू । बाटो देखि हामी व्यापार गर्न कसरी, हामी छौं मजा, यो सबै नाटकीय भन्दा फरक यो थियो बस एक जोडी को दशक पहिले । सबै कि, स्वाभाविक, आमूल प्रभावित दुवै दुनिया को मुख्यधारा भिडियो खेल र संसारको वयस्क pleasures. सबै को संयुक्त बारे ल्याए, एक अद्भुत कुरा भनिन्छ Patreon वयस्क खेल ।
When it comes to XXX खेल, कुराहरू थिएनन् देख उज्ज्वल बस वर्ष फिर्ता । बनाउने खेल सजिलो थिएन रूपमा यो लिन्छ प्रशस्त समय, स्रोत र जनशक्ति. भन्ने अर्थ मात्र ठूलो कम्पनीहरु सिर्जना गर्न सक्छ, वितरण, र बेच्न लायक केहि खेल. यसबाहेक, ती मुख्यधारा प्रकाशक छैन साँच्चै तल जाने, को खरायोको प्वाल सिर्जना, सबै प्रकारका को kinky शीर्षक गर्न गाह्रो हुनेछ भनेर बजार को मुख्यधारा दर्शक । त्यहाँ थिए, र अझै पनि छन्, प्रशस्त नियम र विनियम जब यो आउँछ यस्तो कुरा । , आज पनि, तपाईं गर्न सक्छन् आशा छैन एक तीन-एक शीर्षक देखि एक प्रसिद्ध स्टूडियो गर्न एक अश्लील खेल. निश्चित, त्यहाँ हुन सक्छ एक सेक्स दृश्य यहाँ र त्यहाँ, तर यो सबै रूपमा softcore रूपमा यो हुन्छ.
Patreon वयस्क खेल, अर्कोतर्फ, हो प्रयासमा को साना, स्वतन्त्र टोली वा व्यक्तिहरूलाई उपयोग गर्ने आधुनिक प्रविधी बनाउन अविश्वसनीय कुराहरू । हार्डवेयर र सफ्टवेयर भए, अधिक र अधिक शक्तिशाली छ, हामी छौं एक बिन्दु पुगेको, जहाँ यो सम्भव छ एउटा मान्छे यो सबै गर्न. अनुमति कि एक गुच्छा horny कलाकार र विकासकर्ताहरूको गर्न ल्याउन आफ्नो कल्पनामा जीवन. Patreon, बारी मा, तिनीहरूलाई दिनुभयो संभावना प्राप्त को धन को लागि आफ्नो परियोजनाहरु र हामी कसरी मिल्यो एक टन को अचम्मको अश्लील खेल ।
Patreon वयस्क खेल वृद्धि छन्
त्यहाँ पहिले नै एक टन यी खेल को सबै भन्दा इन्टरनेट । क्षण तिनीहरूले सुरु बाहिर आउँदै र मान्छे बुझे आफ्नो क्षमता, सबै कुरा बढ्दै सुरु exponentially. कल्पनाशील रचनाकार सबै भन्दा संसारमा बाहिर समझ तिनीहरूले प्रयोग गर्न आफ्नो कौशल र फोहोर मन कुरा बनाउन जबकि एक साथ गर्न सक्षम हुनुको एक जीवित बनाउन वा, कम से कम, पैसा गुमाउन छैन मा यो प्रक्रिया. अन्य पक्ष मा, gamers को लागि भोक XXX कार्य गरेका थिए गर्न पाउँदा खुसी भन्दा बढी योगदान गर्न एक राम्रो कारण, विशेष गरी थाह पाउँदा तिनीहरूले हुनेछु पुरस्कृत संग एक रोमाञ्चकारी अनुभव अन्त मा.
Patreon वयस्क खेल एक उत्पादन हो जहाँ एक अवस्था हरेक पक्ष जीत । र, जब तपाईं चुक्छौं मा केहि जस्तै, यो केवल प्राकृतिक कुरा गर्न अगाडि जान. अधिक रचनाकार सामेल, अधिक अनुयायीहरूलाई राखिएको प्रदर्शित, र, चाँडै पर्याप्त, पनि सानो-समय, अश्लील खेल विकासकर्ताहरूको थिए बनाउने राम्रो पैसा । तर, जहाँ ठूलो कम्पनीहरु सुरु हुनेछ कडाई देख एक मुनाफा while neglecting गुणवत्ता, indie विकासकर्ताहरूको प्रयोग गरेका थिए कि सबै नगद प्राप्त गर्न राम्रो उपकरण र पनि अधिक प्रदान गर्न गुणवत्ता आफ्नो निम्न. सबै पछि, तिनीहरूले चाहेनन् रोक्न र lose it all.
अर्को सफा सुग्घर कुरा सारा प्रक्रिया बारे थियो क्षमता को दर्शक मा भाग लिन प्रक्रिया को निर्माण । Patreon वयस्क खेल बनाएको छैन छिटो र प्रकाशित तुरुन्तै । बरु, विकासकर्ता समय लिन्छ र पोस्ट नियमित अपडेट गर्न आफ्नो अनुयायीहरूलाई सुनिश्चित, एउटा अटुट प्रवाह धन प्रदान गर्दा संरक्षक संग प्रारम्भिक पहुँच र अन्तरदृष्टि छ । त्यो बाटो, मान्छे गर्न सक्षम छन्, खेल खेल्न सही यो प्राप्त-जाओ देखि, अनुभव अध्याय एक मा एक समय, आनन्द र यो जस्तै एक टीवी श्रृंखला । बस भनेर, तर तिनीहरूले दिन सक्छ फिर्ता रचनात्मक आलोचना र पनि परिवर्तन को पाठ्यक्रम, यो खेल छ ।
उत्पादनहरु को एक किसिम देखि चयन गर्न
एक मासिक सदस्यता कसैले गरेको Patreon doesn ' t cost much. सामान्यतया, यो रूपमा कम हुन सक्छ, एक मुद्रा वा दुई । भन्ने अर्थ गर्न प्राप्त आनन्द उठाउन चाहनुहुन्छ केहि को लागि एक कम मासिक मूल्य । खेल संग आउन एक सफा सुग्घर विवरण बताउँछ कि सबै एक संभावित gamer गर्न आवश्यक थाहा पनि पहिले साइन अप. सिर्जना कि एक प्रतिस्पर्धी वातावरण जहाँ हरेक डेभलपर झगडे समातेर सबैलाई अरू कसैको ध्यान र जा राख्न थप. को सरल प्रक्रिया सुनिश्चित एक विशाल मात्रा जसको अर्थ धेरै छन् विभिन्न Patreon वयस्क खेल देखि चयन गर्न । , र, तापनि प्रशस्त यी अझै विकास मा, धेरै छन् तिनीहरूलाई नै समाप्त मा, इन्टरनेट, र हुन तयार खेलेको छ ।
विविधता आउँछ दुवै दृश्य र gameplay विभाग । सही सुरु देखि, तपाईं को लागि जान सक्नुहुन्छ एक 3D खेल वा अधिक cartoonish एक । जुनसुकै आफ्नो रुचि आशा, तर केही impeccable दृश्य । 3D CGI प्रस्ताव अभूतपूर्व यथार्थवाद र बालिका तपाईं देख्नुहुनेछ र बकवास मा यी शीर्षक हेर्न भन्दा पनि राम्रो वास्तविक जीवन chicks. तपाईं छौं कि मा ठूलो वा सानो स्तन, blondes, redheads, brunettes, किशोर, वा MILFs, तिनीहरूले यो छ सबै छ. र, लागि प्रेम hentai वा वयस्क कार्टून छन्, बस रूपमा धेरै Patreon वयस्क खेल पूरा गर्न आफ्नो फोहोर आवश्यक छ ।
When it comes to gameplay, त्यहाँ पनि एक धेरै माध्यम ले जाने. Whether you ' reaकुशल gamer जो सधैं देख को लागि एक चुनौती छ, वा गर्न चाहन्छ जो कसैले मसला आफ्नो वयस्क adventures माथि, यी शीर्षक यो सबै छ. को एक ठूलो लहड छ आजकल दृश्य उपन्यास जहाँ तपाईं नियन्त्रण लिन को मुख्य चरित्र र मार्फत नेभिगेट कथा जबकि बनाउने विकल्प र tailoring को साहसिक आफ्नो आवश्यकता अनुसार. तर त्यहाँ कुनै कमी आरपीजी, FPS, साहसिक शीर्षक, र अधिक.
एक कहिल्यै-बढ्दै रङदानी को खेल देखि चयन गर्न
उल्लेख रूपमा, Patreon वयस्क खेल सबै क्रोध हो आजकल. र हुनत त्यहाँ एक विशाल राशि सबै भन्दा वेब, अधिक र अधिक माथि popping राख्न बायाँ र दायाँ । यो एक snowballing प्रभाव जहाँ सबैलाई संग एक विचार दिन्छ यो एक शट, अझै मात्र सबै भन्दा राम्रो रहन । कि सुनिश्चित दुवै गुणवत्ता र मात्रा. यति धेरै खेल परिसंचरण मा, यो बिल्कुल अप्रासंगिक के गुदगुदी आफ्नो फैंसी । तपाईं बाध्य छौं भन्ने कुरा पत्ता लगाउन हुनेछ बनाउन आफ्नो रगत फोडा र त्यसपछि यो खेल गर्न कुनै र । You don ' t even need एक पीसी रूपमा तपाईं खेल्न सक्छन् मा एक स्मार्टफोन.